Tuesday, 24 January 2017 12:41	Rate this item
आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन सात पार्टीले सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन। सद्भावना पार्टी सरकारमा थियो। फरक मत लेखेर सरकारमा बस्ने सद्भावना पार्टीको निर्णय अन्ततः आत्मघाती नै सावित भयो। मधेसी अधिकारको सवालमा लामो इतिहास बोकेको एकल परिचय बनाएको सदभावना पार्टीलाई उछिन्दै मधेश राजनीतिमा मधेशी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवको उदय भयो। भुल्नै नसक्ने नोट अफ डिसेन्टको दुर्गती सम्भवतः सद्‌भावनाले अहिले पनि अनुभूति गरिरहेको होला।
त्यसकारण संविधान संशोधन भनेको बिद्यमान ब्यवस्थालाई स्थिरता र निरन्तरता दिने हो। संशोधन भनेको असन्तुष्ठीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया मात्र हो, चित्त बुझाउने मेसो हो। तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो ? – सेतोपाटीको सहयोगमा । Read 643 times	Tweet
« नेतृत्वले नयाँ एजेण्डा ल्याउने होइन भएकैलाई निरन्तरता दिने हो प्रदीपकुमार केडिया अध्यक्ष वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ	ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा र बारामा सेज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छु - ओमप्रकाश शर्मा अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ »